Manasa anao izahay mba hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto hazakazaka. Mifidiana ny mpandeha fiara, kamiao, fiara fitateram-bahoaka, traktera, lamasinina, moped na môtô, atv na scooter. Ao amin'io tsanganana, ny rehetra feno andian-kamiao voatery sy amin'ny toe-javatra tsara. Fiara miandry anao ny mifidy ny fitaovana mba mandroso sy nipoaka. Soavaly, soavaly sy ny ombimanga mandray anjara ao amin'ny hazakazaka, ary izany ihany koa ny hazakazaka. Bala afomanga dia feno ny tsara indrindra, ary efa vonona ny Surf toerana ny solika. Ny hazakazaka ihany koa ny anjara ny mpihazakazaka ao amin'ny kianja na amin'ny ratsy ny lalana. Reseo Ireo Vato Misakana ary handresy!
Fiaran-tsoavaly manafika mahery
tsy manam-petra Truck
Fiara fiara: Ririnina fialantsasatra
Fifamoivoizana an-tserasera an-tserasera
Ny fiara mihinana ny fonjan'ny mpiambina fiara
Lalao Punk roa
Fanamby maditra madio
Fanaterana fiara simulator
Ny fiara fiara mihinana ny ranomasina
Kamiao kamiao 18
Real Stunts Drift Fiara mitondra fiara 3d
Mini Foko Rush
Fiakan'ny tanàna taloha
Kamiao kamiao: fitsangatsanganana amerikanina
Island Clean Truck Sim
Voatarika Cup Racing
Lalao Racing Games tamin'ny Category:
Farany Racing Games
Hazakaza F1 Alcatel
Surfers Surfers Copenhagen
Toeram-piantsonana ambanin'ny tany ambanin'ny tany Surfers
Ilaina ny mitondra fiara amin'ny fifamoivoizana
Surfing Cube 2
Nipoaka ny fampisehoana Tom sy Jerry!
Lalao Online Racing Games Online
Nahazo rindrambaiko online: fahafinaretana sy antoka azo antoka Ny lalao fiadiana dia anisan'ny sokajy fialamboly izay tiany. Raha milaza ny olona iray fa tsy mahita fahatsapana na fahafinaretana amin'ny fandao ny làlana izy ary mitondra fiara iray, fantaro: mbola tsy nahita ny kilalao nataony izy. Ny lalao lalao amin'ny lalao dia nanangona fiara goavam-be izay afaka manome fahafaham-po ireo faniriana be pitsiny sy tsy fantany. Soa ihany fa gaga ireo mpikirakira na dia mpilalao mahay aza: ny rindrambaiko dia havaozina tsy tapaka amin'ny fifaninanana vaovao vaovao, fampisehoana an-tserasera vaovao ary vaovao mahaliana mahaliana avy amin'ireo boky malaza. Ny Internet racing online dia karazana tolotra faran'izay betsaka amin'ny PC na fitaovana finday. Ny panoramasiana manintona na ny endri-ponenana apokalyptika, ireo fiaramanidina fanatanjahan-tena na ireo vokatra malaza avy any an-tokantrano, ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fialan-tsasatra tanteraka amin'ny lalao fanta-daza dia tsy hamela tovovavy na ankizivavy tsy miraika! Mandritra izany fotoana izany, tsy tahaka ireo fampihetsiketsehana sarotra sy goavana ho an'ny ordinatera, ny tranonkala tranokala dia tsy lehibe, tsy mila mandefa sy manamboatra rakitra na fandaharana hafa izy ireo: milalao eto ary dieny izao!
Fiantsoana an-dalambe na famoriam-bahoaka: inona no tokony hatao …
Ohanao milalao hafa amin'ny races: tamin'ny faran'ny taona 1970-1971 fotsiny dia maotina fotsiny ny Space Race sy Speed ​​Race izay misy fotony mainty sy fotsy ary asa kely tsotra. Amin'izao fotoana izao, na dia ny simulateur rameva tsy maotina aza dia afaka mamerina ny lanjan'ny fiara fitondra-tena, raha mahafa-po amin'ny fomba fijery mahavariana. Efa ho dimampolo taona izao, ny fihoaram-peonkira voalohany dia nanjary fihetsika manintona, izay ahafahanao mifehy ny singa sy ny singa rehetra! Tsy azo atao ny mametraka ny amin'izao fotoana izao ny fifaninanana an-tserasera an-tserasera, satria na dia ao anatin'io fifanandrinana io aza dia misy ny fiaran-tanin'ny tany sy rano tsy misy na inona na inona misy anao, ary ny sasany dia manandrana manandrana ny tenanao ho mpitari-bato na helikoptera. Raha ampiantsika amin'izany ny filazalazana ny fiara, ny safidin'ny mpilalao fototra, ny toerana sy ny misiona, dia mety tsy ho tafiditra ao anatin'ny pejy zato vitsivitsy ny rafitra fanaraha-maso. Ary nahoana no maina sy manahirana ny manondro zavatra izay ahafahanao mimenomenona fotsiny? Manatòna ny safidy amin'ny saina na mampiasa ny randomness: raha tsy izy rehetra, avy eo ny hazakazaka faharoa dia haka anao hatramin'ny segondra voalohany aorian'ilay fanombohana, ka hanery anao hanadino ny asa mahatsiravina sy ny tsy firaharahiana isan'andro.
Manavotra ny teti-bola ary mamerina amin'ny laoniny ny fototry ny hazakazaka bisikileta malalaka
Ny lalao amin'ny lalao dia tia ny rehetra: avy amin'ny mpianatra sy mpianatra ho an'ny mpiasan'ny birao, haingana, mandeha fiara ary mandresy zava-tsarotra mahavariana hamafa ny fahasamihafana eo amin'ny sehatra, taona ary zom-pirenena. Mandritra izany fotoana izany, ny gry races online dia mety ho fitaovana mahomby ho an'ny fitsarana mba hanampy hahitana hoe iza no haingana kokoa, mihetsiketsika ary mikorontana. Azonao atao ny mifaninana ara-bakiteny amin'ny fomba iray:
miaraka amin'ny fotoana iray amin'ny fotoana iray ihany;
miverimberina mamaritra sy mampitaha ny valiny;
amin'ny alalan'ny fifandraisana misy tamba-jotra ho an'ny orinasa roa na lehibe;
amin'ny tetika ary tsy misy azy ireo, manantena fotsiny fa hahazo vintana tsara;
amin'ny fihenan'ny haavony rehefa mitongilana na mandroso,
eo amin'ny lalana eny amoron-dalana na mihetsika eo amin'ny toeran'ny toeram-pitsaboana;
manenjika sy manilika ny mpanohitra mahery fihetsika (matetika fitaovam-piadiana fitaovam-piadiana ny fiara) na miezaka ny mialoha azy ireo, maneho ny fifehezan-tena sy ny fahaiza-mitarika amin'ny fampiofanana,
- manaiky ny fitsipika napetraka na mametraka ny antontan-taratasy manokana: ohatra, amin'ny fiara miongana indrindra, amin'ny isan'ny fefy nopotehina dia tsy tokony hametra ny fisainana amin'ny fivoriambe tsy ilaina!
Karazana fiaviana arakaraka ny taona:
lalao ny ankizilahy
ho an'ny zazavavy.
Na dia be aza ny fahasamihafana sy ny fahasamihafana manan-danja amin'ny lalao fiara manokana, ny fototry ny hazakazaka dia ny iray amin'ny farany dia tokony ho tonga mpandray anjara tsara indrindra!
Ny fampiharana ny fads amin'ny fiainana tsy misy fanelingelenana avy amin'ny fitaovana display
. Raha ny marina, ny mpiasan'ny mpamily na tsiambaratelo dia mankamamy ny nofinofiny mba hahazoana ny ankamaroan'ny motera: mazava ho azy, tsy misy lalana ho an'ny daholobe izany, fa ny lalam-panajana manokana na online racing dia ny ankamaroany! Ilaina ny manamarika ny tsipiriany amin'ny antsipiriany amin'ny lalan'ny teknolojia nahazoan-dàlana: mitandrema ny fahaiza-manaon'ny Aston Martin, Corvette, Bugatti Veyron na ny modely Audi farany alohan'ity fitiliana ity, izay mety tsy manam-potoana hanaovana drafitra.
Restao ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreniny
Ny lalao Racing dia universele sy tsy misy vanim-potoana: midera azy ireo ny ankizy mendri-piderana ary mendri-piderana ny lehilahy. Tsara ny manomboka ny dingana voalohany amin'ny fametrahana PC na solosaina miaraka amin'ny ankizy iray avy amin'ny fifaninanana. Ao amin'ny serivisinao dia ireo andian-tsarin'ny mpanao sariitatra malaza sy ny fiara maharitra (indraindray): Tom Cat amin'ny bisikileta quad, Mario ao anaty fiara madinidinika, Peppa pig eo amin'ny bisikileta, izao tontolo izao amin'ny lozam-pifamoivoizana an-dranomasina Sponge Sponge, Fiksiki, Evil Birds dia mankasitraka ny iray amin'ireo universe efa misy ! Fantatry ny rehetra fa ny fijerena tsy voafehy na maharitra ny sarimiaina dia mety hanimba ny psyche mahavaky ny sombin-kazo, izay indraindray dia tena sarotra ny handrava ny fahitalavitra. Ny ankamaroan'ny renim-pianakaviana sy raiamandreny dia afaka mampifantoka ny sainin'ny ankizy tsy misy fanavakavahana sy fitarainana: ny sosokevitra ho an'ny sokajy, ary na dia ireo olona izay tianao aza dia raisina amim-pifaliana sy hafanam-po foana. Ny fiovana hafa amin'ny karazana asa dia efa resaka teknolojia: ny fifaninanana haingana sy ny fifaninanana dia mora mora kokoa amin'ny famolavolan'ny fianakaviana na ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara ao amin'ny valan-java-bary akaiky indrindra. Tena mila fitsaboana ara-psikolojika, olona efa nahatratra taona matotra. Ny fomba tsara handosirana ny henjana isan'andro sy ny zava-mahadomelina dia ny fitohanana malaza any Etazonia. Mampatanjaka ny toerana ambony ireo mpitaingin-tsoavaly amin'ny fanombanana ny fanatanjahantena mampientanentana indrindra, amin'ny fitadiavana mpanara-dia azy tsy any amin'ny firenena hafa, fa ao amin'ny tranonkala ihany koa. Ny fifaninanana Game for free dia mamela mpilalao iray mankany amin'ny sambo milevina efa tapa-davitra amin'ny fanantenana ny fikolokoloana tsy azo avela ary ny adrenalin. Ny simulateur dia mamerina tanteraka ny dingana rehetra amin'ny fifaninanana: avy amin'ny fanomanana fitaovana ho an'ny fandresena nandresy. Ny mpampiasa dia afaka mahazo: - fiovan'ny fitaovana fototra sy ny toetoetran'ny fiaramanidina (ara-dalàna na tsy ara-dalàna); - famaritana kilasy (hazavana eny an-dàlambe, haingana, tsy voafetra ary hafa miankina amin'ny tetika ankapoben'ny lalao); - fanitsiana ny antsipiriany sy ny antsipirihany momba ny faritra voavaha (làlan-dàlana, toetr'andro, fitsangantsanganana sy fiakarana, fitsabahana, sns. n.). Ny amin'ny onjam-peo amin'ny onjam-peo dia mifantoka amin'ny fifantohana sy ny hafanana haingana. Izy io no iray amin'ireo simulateur tsara indrindra, mamelatra ny fahafahana manitsy ny voka-dratsin'ny fihetsiketsehana ary ny fifehezana ny fihetseham-po tsy azo ovaina indrindra. Trophis mahatsiaro sy mahafinaritra amin'ny fotoana lalao amin'ny lalao lalao!